Akunakwenzeka ukudibana nomntwana ongafuni ukukhawuleza abe ngumlingisi wokuqala. Kodwa ngokugqithiseleyo kwexesha, ngokukhawuleza inzondelelo yenkwenkwezi yenkwenkwezi ibonakala emehlweni omntwana, kwaye emva kwesikolo abazali bakhe kufuneka bathumele ngokukhawuleza, baqhube yonke i-arsenal yefuthe. Indlela yokufundisa umntwana ukuba afunde, kwaye iya kuxutyushwa ngezantsi.
Ukulungisa umntwana esikolweni, ngamanye amaxesha abazali kufuneka basebenzise "iinqwelo ezinzima" -suka kwisithembiso sokuthenga ibhayisekile entsha kwiisongelo zokusebenzisa ibhande likayise. Bobabini, eqinisweni, banefuthe. Kodwa uhlala ixesha elifutshane kwaye akayikukholisa nayiphi na icala. Ulwazi alufumanwanga, inzuzo yokufunda ayiqinisekanga, ixesha liphela. Yintoni endiyenzayo? Yiloo nto iingcali ezithethayo.
Indlela yokwenza umntwana afune ukufunda?
Okwangoku, kukho iindlela ezininzi zokuphuhliswa kwangaphambili komntwana. Abazali baqhubeka bethumela abantwana esikolweni nge "zero" yolwazi, bathi, kukho konke kuya kufundwa. Kwaye iimfuno zabaqashi bokuqala zitshintshile. Ngoku iklasi yokuqala ithathwa ngabantwana abaqeqeshiwe. Abanamhlanje abaneminyaka engama-6 ubudala sele befuna ukukwazi ukufunda nokudibanisa nokukhupha iinombolo zokuqala. Kodwa ngaba oko kuthetha ukuba bayilungiselele ngokupheleleyo isikolo?
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba abazali bathambe ukuthumela umntwana wabo esikolweni ngokukhawuleza. Umzekelo, kungekhona ngeesithandathu, kodwa ngeminyaka emihlanu nesiqingatha. Kukho iinkcazelo ezahlukeneyo kule nto. Ngokwenene, oku kwenziwa ukwenzela ukuba ube "unyaka" wonyaka ngaphambi kokuba angene enyuyunivesithi okanye ngenxa yokungafuni ukugubha emva kwabanye. Njengaye, "UTanya esuka kwindlu yeshumi sele sele eya esikolweni. Kwaye yethu imbi kunokuba? ". Kuyamangalisa ukuba izizathu ezinjalo zingalimaza kamva umntwana empilweni. Emva kwakho konke, kuyimfuneko ukuvavanya umntwana wakho ngokuchanekileyo, kwaye kungekhona kwisikhundla sothando lwalamane. Inyaniso yokuba umntwana uyazi indlela yokubona iileta aze athathe ixesha elincinci alithethi ukuba ulungele isikolo. Ukulungelelanisa, okokuqala, kunqunywe kwiqondo lokujonga ngengqondo.
Abantu abadala kufuneka bakhumbule ukuba umdlalo - obaluleke kakhulu kweli nqanaba lophuhliso lomntwana. Oku kubaluleke kakhulu into yokuba ukwazi ihlabathi njengokufunda. Umntwana ngamnye ufuna ukugqiba umdlalo wakhe ngaphambi kokuba akwazi ukuhlakulela umnqweno wokufunda. Iminyaka eyisixhenxe - i-age-graders ayiyiyo yonke indawo. Yona yona nto ilungileyo yokutshintsha kakuhle ukusuka kumdlalo ukuya esikolweni. Akukho nto iyingozi kwaye inobungozi kubantwana ngeendlela zokuphuhliswa kwangaphambili. Enyanisweni, kuphela xa umntwana enganyanzelwanga ukuba enze oku - mhlawumbi awukwazi ukuphepha iingxaki. Inomdla kwisikolo iphela ngokukhawuleza emva kokuqala konyaka wokuqala wesikolo. Khumbula: ukulungele isikolo kuthetha ukuba akunakunzima ukufunda ngeelwimi, ukuba ube nesimo sengqondo esilungeleyo, umnqweno kunye nokukwazi ukuqonda ulwazi olutsha. Ngoko ngaphambi kokuba ufunde izakhono ezithile kumntwana wakho, cela yena nombuzo othi: "Ngaba ulungele? ". Kwaye akunjalo ukuhlazola ukuphendula ngokunyanisekileyo: "Hayi, silunge ngakumbi."
Isibetho okanye isanqante?
Yintoni enokuyenza xa umntwana engayiqondi isizathu sokuba abantu bafundwe, kwaye kutheni sifanele sifunde ukuba akayithandanga nhlobo na? Okokuqala, kufuneka ufumanise imbangela yecala - inokuhluka ngokuxhomekeke kwiminyaka yobudala. Okwesibini, zama ukungabhekiseli kwiindlela zokugweba utywala. Awukwazi ukufaka emntwaneni wakho nantoni na ngeenkcukacha ezithintekayo kunye nebhande. Kodwa ngengqondo yokuphikisa okuqhubekayo esikolweni kunye nokufunda ngokubanzi, umntwana unokuhlangana. Akukho ngaphandle lwakho uncedo.
Zama ukuzikhumbula kule minyaka. Yintoni eyakunomdla? Emva koko, ingxaki ebalulekileyo yabantu abadala - bayayikhohlwa ngokupheleleyo loo nto ababeyiyo kwiklasi yokuqala. Kwaye ukukhumbula ukuba kubalulekile ukunceda umntwana wakho kamva kwaye ube nomnqweno wokufunda.
Indlela yokufundisa umntwana ukuba afunde?
Eyona nto ingenakuthelekiswa, kodwa kunye nokukhetha kunzima ukufumana umntwana ukuba afunde ulwazi ngenxa yolwazi. Abo bazali abawuphetheyo banengqiqo kakhulu kwaye bacinga ngokucinga ngekamva lomntwana. Baqonda ukuba yonke imihla umntwana kufuneka alungele ukuvula ihlabathi kuye ngokwakhe. Ngoku-yedwa-ke-kunye nabantwana babo. Izindlu apho kukho iintsapho zizaliswe ngokuqhagamshelwano oluphakathi-ingxoxo yeencwadi, iifilimu, iingxoxo kunye nentetho ngentliziyo.
Umzekelo omhle. Kubalulekile ukuba umntwana abone ukuba umama nobaba bafunda lonke ixesha kwaye banako ukuyonwabela oko, yena ngokwakhe uya kufuna ukubalingisa kuzo zonke izinto. Musa uvila ukukhulisa umntwana, mthabathe emibonisweni, kumyuziyam, kwiikonkethi, kwaye uhlale uxoxa ngezinto ozibonayo. Ungamvumeli ukuba umnqweno womntwana upheleke - kwaye kuya kuba lula ukuba umntwana adlulise lo mdla ukuba afunde. Kule meko, le nkqubo iya kwenzeka ngokwayo.
Isiphumo sobukho. Ukwenza umsebenzi wesikolo kunye neklasi yokuqala ndawonye. Nangona kunjalo, akuqhelekanga kwiimeko ezinzima xa abazali kufuneka bahlale kunye nabantwana babo kwizifundo, phantse ngaphambi kokugqiba. Oku kukhetha ukuphela kwesithuba sokufa. Ekupheleni konyaka wesibini wesikolo, abantwana kufuneka bafunde ukwenza yonke imisebenzi yabo yasekhaya ngokwabo. Ukuba umntwana unombutho ongekho kakuhle, uphazamiseka rhoqo - iingqondo zeengqondo zicebisa ukuba zenze umphumo wobungqina. Yiba kufuphi nomntwana xa elungiselela, kodwa yenza umsebenzi wakho, ukumbona nje.
Imbuyekezo yezinto eziphathekayo - into enhle, nangona kunjalo ingqubuzana. Kodwa emva koko, ukufundisisa kwakhona kusebenza, kwaye nayiphi na umsebenzi kufuneka ihlawulwe. Le ngongoma yombono kwaye unelungelo lobomi. Ubungakanani bomvuzo buxutyushwa phambili ngaphambili kwibhunga leentsapho. Makube ngumlinganiselo omncinci - unike umntwana imali ngeendleko zeefowuni. Kutheni angayifumani le mali?
Ukulwa. Makhe umntwana afunde ukufumana ukwaneliseka ekujongeni ubunzima. Phawula naye naluphi na uloyiso olungabalulekanga, umdumise kwaye uvuyo ngokunyanisekileyo. Makhe azive ukuba unjani ukuphumelela. Qaphela indlela ovavanya ngayo impumelelo yabantwana: ungagxininisi kwizinto ezimbi. Ngokomzekelo, esikhundleni sokuba "uphinde ulawulo lwesithathu olwamkelekileyo," uthi: "Ngeli xesha uqale ukhetha isigqibo ngokufanelekileyo, kodwa ulahlekelwe encinane."
Wonke umntwana uyaqiniseka ukuba uyamdinga ngaphezu kwakho. Mkhuthaze uqeqesho. Ngokuqinisekileyo ufuna ukuba ngumntu. Chaza umntwana ukuba ulwazi alugcini nje luzisa uvuyo ngokwalo, kodwa lukhokelela ekuzalisekeni kwephupha.
Awudingi ukuphulaphula umntwana okanye ukumemeza. Thetha naye njengomhlobo - ngokulinganayo. Le ndlela ifanelekileyo yokunxibelelana, kwaye ibangela iziphumo ezilungileyo. Emva koko, into ephambili ebantwaneni bethu ifuna ukuthetha. Ufudumele, unyanisekileyo kwaye unobungane.
Umntwana uvame ukugula eguleni
Ucwaningo lweengqondo kwi-kindergarten
Ukuba umntwana uyakhala e-nursergarten
Ziziphi iimpahla ezinokugqithwa ngabafazi abakhulelweyo
UTatyana Peltzer, ubugcisa
Soufflé nge cheese eluhlaza
U-Stas noYulia Kostyushkina balindele ukuzaliswa kwintsapho
IiVithamini zesikhumba esihle kwaye sempilweni
Isaladi yokuzonwabisa "I-Hedgehog kwi-fog"
AmaScythe kunye neentlobo zabo zokuluka
Iimfihlelo zentsebenzo yokwenza umsebenzi
Iresiphi yonyaka omtsha weepeji ezintsha kunye nama-mushroom
Izidlo zonyango ngezifo ezahlukahlukeneyo
Indlela yokuhlambulula ubuncinane beenwele ezinwele?